Deg Deg, Kaamboolka Xerada xalane ee Magaalada Xamar ee aay degan yihiin Wakiilada Reer galbeedka oo Loo gaystay Weerar Hoobiyayaal ah | Biyoguurenews.com
Home Wararka Deg Deg, Kaamboolka Xerada xalane ee Magaalada Xamar ee aay degan...
Deg Deg, Kaamboolka Xerada xalane ee Magaalada Xamar ee aay degan yihiin Wakiilada Reer galbeedka oo Loo gaystay Weerar Hoobiyayaal ah
Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya saameynta madaafiicda hoobiyeyaasha oo gudaha ugu dhacay xarunta Qaramada Midoobey ee UNSOM.
Illaa afar madfac ayaa ku dhacay xarunta UN-ka, waxaa la sheegayaa in labo ruux oo shaqaalaha UN-ka in dhaawac ka soo gaadheen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in mid ka mid ah Hoobiyeyaasha ku dhacay hoyga Kuxigeenka Wakiilka Qaramada Midoobey.
Madaafiicda lagu garaacay xarunta Xalane ayaa ku soo beegmay, iyadoo maanta loo dabaal degayo sanadka cusub ee 2019, isla markaana inta badan shaqaalaha UN-ka iyo kuwa kale ee Ajnabiga ay fasax yihiin.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarkan dhacay maanta.
Previous articleMareykanka oo raalli galin ka bixiyay arrin dunida ka careysiisay
Next articleFarmaajo oo Eryay Ergaygii qaramada Midoobay u fadhiyay xamar Kuna Qoonsaday